နောက်ဆုံးတော့လည်းအကောင်ကြီးကြီးအမြီးရှည်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်..မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါပါပဲ (မာရီနာ) | venuscurves
Missuniverse myanmarပွဲကဒိုင်တွေကmiss တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်ဟာ ဆယ်မိနစ်တောင်မရှိသေးဘူး နှစ် Round. ပဲရှိသေးတယ် ဘာကိုကြည့်ပြီးဘယ်အချိန်ရွေးလိုက်တာလဲဟင် Top ten ဆယ်ရောက်ရွေးပြီးသွားပြီတဲ့ တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူးဘာပြိုင်ပွဲလည်းသေချာစဉ်းစားကြည့်အုန်း
ပွဲကြီးရယ် ခများတို့ပေးမဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနဲနဲတော့ယုတ်တိရှိအောင်လုပ်ပါအုန်း..အခုတော့ကွယ်ရုပ်ပေါက်လွန်းပါတယ်...မပါတဲ့ကလေးတွေထဲမှာအရည်အချင်းရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ် အားလုံးဟာအဖြည့်ခံဖြစ်ရတဲ့ကလေးတွေအတွက်အရမ်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် လူရောစိတ်ရောအချိန်ကောအားလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး မြန်မာပြည်တိုးတတ်ဖို့အဲ့ဒီစိတ်တွေပြောင်လဲသင့်နေပြီ
နောက်ဆုံးတော့လည်းအကောင်ကြီးကြီးအမြီးရှည်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်..မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါပါပဲ ...စိတ်ထားမကောင်းလည်းရတယ်ဟန်ဆောင်ပြုံးအပေါ'ယံတွေလုပ်တတ်ရမယ် ..ဖားတတ်ရမယ်,body beauty ကလည်းလှဖို့မလိုဘူးပေါင်တွင်းကြောတွေပြတ်လည်းဖြစ်တယ်,talent လည်းမလိုဘူး yes or no ဆိုဖြစ်တယ်,နောက်ခံbackgroundလည်းကောင်းစရာမလိုဘူး..တောင့်ဖို့ပဲလိုတယ် အကောင်ကြီးကြီးထဲကဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်,စည်းကမ်းလည်းရှိစရာမလိုဘူး ဒါတွေပြည့်ဆုံရင် miss တစ်ရောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတစ်ရေးအိပ်ပြီးပြိုင်လည်းရတယ် ..ကဲကျန်တဲ့ညီမလေးတွေစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပွဲလေးတွေလာပါစေလို့သာဆုတောင်းပေတော့,ကိုတွေကတော့အမှန်တရားပဲပြောတယ်,အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတယ်...နာဂတိုင်းရင်းသူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ,မှတ်ချက်-တိုက်ဆိုင်သွားရင်sorry
ကျွန်မသည် ဘယ်သောအခါမှ သူတစ်ပါးအပေါ' မတရားတာ မလုပ်ဘူး,မတရားတာမပြောဘူး,တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားကိုရှေ့ထားပြီးအမြဲစဉ်စားပြီးမှလုပ်တယ်,သူတစ်ပါးထိခိုက်အောင် ဘယ်သောအခါမှမလုပ်ဘူး ,စိတ်ထားကိုးလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်ထားတယ်,ဘုရားတရားလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး,မိဘကိုလည်းကျွန်မ ငယ်ငယ်လေးထဲကတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်နဲ့ရှာကျွေးခဲ့တယ်,ကျွန်မ၅တန်းနှစ်ကတည်းအမေကိုဈေးရေင်းကြွေးတယ်,မနက်လေးနာရီလောက်ဆိုထပြီးစက်ဘီးနောက်ဈေးခြင်းတောင်းထဲငှက်ပြောသီးသင်းသီး,ငှက်ပြောဖူး,ချဉ်ပေါင်တွေထည့်ပြီး တစ်နာရီလောက်နင်းပြီးသွားရတဲ့ခရီးကိုစက်ဘီးနင်းပြီးသွားရောင်းတယ်,နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆ်ိုရင် မြေပဲသွားနုတ်တယ်,ပုရံတွေလိုက်လုပ်တယ် ,လေယာဉ်ကွင်းလမ်းဖောက်,ဗန်းမော် တက္ကသိုလ် ကျောင်းစဆောက်တော့လည်း ကျွန်မပုရံလုပ်ခဲ့တယ် နေ့ဆိုင်းကောညဆိုင်းကောကျွန်မဆင်းခဲ့တယ်မနက်9နာရီကနေ ည12နာရီအထိ ပုရံဆင်းတယ်,ကျွန်မအမေကလည်းငယ်ငယ်လေးထဲကအကုန်သင်ပေးတယ်စိတ်ဓါတ်ရေးရာကော,အလုပ်အကိုင် ကော ,စည်းကမ်းလည်းအရမ်းကြီးတယ်,အရမ်းလည်ကြောက်ရတယ် အိမ်မှာခြံခတ်ဖို့ကအစကိုယ်တိုင်တောထဲသွားပြီးဝါးခုတ်ရတယ် ,ကိုယ်တိုင်ဝါးထရံ ယက်ပြီးကိုယ်တိုင်ခြံခတ်ရတယ်,ကျွန်မတို့တပ်ထဲမှာ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ချက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး , ထင်းခုတ်ရတယ်,ထင်းဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်အတွက်လောက်ရုံတင်မကဘူး ရောင်းပါစားရတယ် ကျွန်မတို့ညီမတွေအလုပ်ကိုအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ် ..ကျွန်မကအိမ်မှာအကြီးဆုံးဆိုတော့အမေကလည်းယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်လိုအားကိုးခဲ့တယ် လင်ပန်းခါင်းပေါ'တင်ပြီးတပ်ထဲဈေးပတ်ရောင်းတာဆိုရင် ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အထိပဲ...သန့်ရှင်းတဲ့ငွေလုပ်အားခနဲ့မိဘကိုကိုတတ်နိုင်သလောက်နဲ့လုပ်ကြွေးခဲ့တယ်...ကျွန်မမလုပ်တတ်တာမရှိသလောက်ပဲ ..အနုပညာကိုငယ်ငယ်လေးထဲကဝါသနာပါတဲ့ကျွန်မက ပထမနှစ်E major နဲ့အောင်ပြီး ရမ်ကုန်ကို အသိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဖွားယောရဲ့အကူအညီနဲ့ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး talents & models မှာသင်တန်းတက်ပြီးသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်မရခင် အဒေါ' တွေဆီသွာံးပြီး အဲ့ဒီမှာခင်တဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူရောင်းပြီးပိုက်ဆံစုတယ်6လလောက်နေပြီး စုလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်လာတယ်အဆောင်နေတယ် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရပြီးtalents&models နဲ့၃နှစ်စာချုပ်ခဲ့တယ် ကြားမှာအမေလည်းရှိတဲ့ပိုက်လေးတွေ့ပို့ပေးခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းကျွန်မ show ပွဲတွေလျှောက်လာရတော့မတောင်းဖြစ်တော့ဘူးမမိုးကစည်းကမ်းအရမ်းကြီးတယ်အမြဲလဲဆုံးစကားပြောတယ် မမိုးပြောတဲ့စကားအခုထိရင်ထဲမှာရှိပါတယ် သမီးကိုယ့်မိဘကိုရှာကြွေးတဲ့ငွေဟာဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ငွေနဲ့ပဲရှာကြွေးပါတဲ့ အဒီစကားကိုအခုထိလက်ကိာင်ထားပါတယ် အဲ့ဒျါကြာင့်ကျွန်မစဥါးစားလိုက်တယ် သြော်ငါငယ်ငယ်လေးထဲကအခုထိသန့်ရှင်းတဲ့လပ်အားနဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့ရှာကြွေးခဲ့လို့အရမ်းကြည်နူးတယ် နောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်တယ် miss latacyd. ဆုတွေအခြားtitle ဆုတွေလည်းရတယ်နောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ဆုကတော့ အာဆီဆယ်နိုင်ငံပြိုင်ပွဲ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမှာကျင်းပတဲ့ပွဲကနောက်ဆုံးပွဲပါ မြန်မာပြည်ကိုာယ်စားပြုအနေနဲ့နှစ်ရောက်သွားပြိုင်ပါတယ်အွန်ဆိုင်းနဲ့မာရီနာ ငါ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကfbလည်းခေတ်မစားသေးဘူး နိုင်ငံခြားပွဲဆိုတာမာရီနာတို့အရင်သွားပြိုင်ခဲ့တာပါ အဲံဒီတုန်းကလည်းအခတ်ခဲတွေအများကြီးပါ မာရီနာကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာတွေလည်းကြားပါတယ်တစ်ခုခုဆိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ် ရတယ်သူများနိုင်ငံတွေRehearsalအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ရပါတယ်မာရီနာမှာနှစ်မိနစ်လောက်ပဲအပြေးအလွားလုပ်ရတယ် အင်္ကျီလည်းအစဉ်မပြေလို့လည်းအကြိမ်၂ငိုခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်စင်ပေါ'မှာအျကာငါးတုံးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံးစကာတင်၅ယောက်အထိဝင်ခဲ့တယ်မေးခွန်းဖြေတာအားနဲခဲ့လို.ပ,ယူ,တနဲ့လွဲခဲ့ပေမဲ့ အကောင်းဆုံး the best talent ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် ...အဲ့ဖဒီပွဲကတော့နောက်ဆုံးပေါ့ အခုတော့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေ,photo တွေရိုက် ,သီချင်းလည်းဆိုတယ်,ကြော်ငြာတွေ,ပြက္ခဒိန်.,အနုပညာမှန်သမျှအကုန်လုပ်ပါတယ်,ဒီနိုင်ငံမှာကတစ်ခုထဲနဲဖ့ရပ်တည်လို့မှမရတာနော်..အဲ့ဒီတော့အကုန်တတ်အောင်လုပ်ထားရတာပေါ့နော်..ပြောချင်တာကကျွန်မသန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ငွေ လုပ်အားခနဲ့ အခုတော့ ကျွန်မမိသားစုကို ကျွန်မတက်နိုင်သလောက် လိုလေသေးမရှိအောင်ထားနိုင်တယ် အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မဂုဏ်ယူတယ် ..ကျွန်မမိဘလည်းဂုဏ်ယူတယ်.. ကျွန်မဘယ်လောက်ပင်ပမ်းပါစေ မတရားနည်းနဲ့မချမ်းသာချင်ဘူး မတရားတာနည်းနဲအသက်မမွေးဘူး ကျွန်မမိဘတွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ဓါတ်တွေရိုက်သွင်းထားပြီးသား အရင်တုန်းကတော့ကိုယ့်ပေါ'မတရားလပ်လည်းခေါင်းငုံ့ခံခဲ့တယ် ခံရပါများလာတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူး အခုတော့မရတော့ဘူးမတရားတာဆိုရင်လက်ပိုက်ကြည့်နေတော့ဘူး ကျွန်မလည်းပုထုစဉ်လူသားပဲလေဘယ်လောက်ထိသည်းခံနိုင်မှာလည်းနော်...သူငယ်ချင်းတို့လည်းတရားသဖြင့်ရပြီးဖြူစင်တဲ့ငွေနဲ့ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်တိာင်းပြည်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ....
Posted by VC at 5:22 AM